एमाले बागलुङ नगरको अध्यक्षमा परियार सर्वसम्मत चयन | KhabarWay.com Nepali News
एमाले बागलुङ नगरको अध्यक्षमा परियार सर्वसम्मत चयन
१० कार्तिक २०७८, बुधबार १७:५३
बागलुङ, १० कार्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बागलुङ नगर कमिटीको अध्यक्षमा धन बहादुर परियार सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको नगर अधिवेशनले बुधबार परियारको नेतृत्वमा ८६ सदस्यीय नगर कमिटी चयन गरेको हो । कमिटीको उपाध्यक्षमा खिमराज सापकोटा, सचिवमा रामकृष्ण शर्मा र उपसचिवमा कृष्ण बहादुर कार्की र गंगाखत्री खड्का चयन हुनुभएको छ ।
पदाधिकारीमा धेरैको उम्मेदवारी दर्ता भएपछि बुधबार अध्यक्ष मण्डलले सर्वसम्मत नेतृत्वको टुंगो लगाएको हो ।
निर्वाचन प्रकृयामा गएपछि दर्ता भएका उम्मेदवारीहरुको उम्मेदवारी फिर्ता नगरि सिधै नेतृत्वको घोषणा गरेपछि उम्मेदवारहरुले अध्यक्ष मण्डलको विरोध गरेका छन् ।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका ध्रुव केसीले आफुले उम्मेदवारी फिर्ता नगरेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रकृयामा गएपछि सोहि अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता गराएर नेतृत्वको घोषणा गर्नुपर्ने थियो अध्यक्ष मण्डलले त्यसो नगरी सिधै घोषणा गरेको बताउनुभयो ।
सचिवमा उम्मेदवारी दिएका चन्द्रगणेश शर्माले अध्यक्ष मण्डललाई सर्वसम्मत गराउने भए जुन पदमा उम्मेदवारी दिएको हो सोहि पदमा सर्वसम्मत गराएर नेतृत्वको घोषणा गर्न माग गरेपनि मागको कुनै सुनवाई नभएको बताउनुभयो ।
‘सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका म (चन्द्रगणेश) शर्मा, अगनबहादुर खड्का (राजु) र बैगुण्ठ सापकोटाले अध्यक्ष मण्डलका प्रमुख गोविन्द नेपालीलाई चिठ्ठी लेखेर सर्वसम्मत गराउने भएमा जुन पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् सोहि पदमा सर्वसम्मत गराएर घोषणा गर्न आग्रह गरेका थियौं तर कुनै सुनुवाई भए,’ शर्माले भन्नुभयो–‘सर्वसम्मतको बाहनामा एउटा पदमा उम्मेदवारी राखेको व्यक्तिलाई अर्को पदमा निर्वाचित गराइएको छ । त्यो निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार भएन ।’
सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अध्यक्ष मण्डलले अवैधानिक रुपमा कमिटीको गठन गरेको बताउनुभएको छ । शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छः नेकपा (एमाले) बागलुङ नगरकमिटीको हिजोबाट सुरु भएको प्रथम अधिवेशनबाट अवैधानिक रुपमा कमिटी गठन भएछ ! उद्घाटनपछि निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले तानाशाही प्रवृत्ती देखाउँदै गुटबन्दी, व्यक्तीवादी चरित्र देखाउँदै कमिटी घोषणा गरेछन् । निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेपछि सचिव पदका तीन उमेद्वारले दिएको लिखित निवेदनको समेत वास्ता नगरी उमेद्वारी फिर्ताको समेत प्रक्रिया नपुराइ गरिएको कमिटी बैधानिक होला र ?
बागलुङ नगर कमिटीको अध्यक्षमा ध्रुब बहादुर केसी, धन बहादुर परियार, रुद्र बहादुर महत, खगराज पाण्डे, गणेश थापा मगर र रामकृष्ण शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको थियो । यस्तै सचिव पदमा चन्द्रगणेश शर्मा, अगनबहादुर खड्का (राजु) र बैगुण्ठ सापकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको थियो ।